कामना सेवा विकास बैंकको निक्षेपमा ४५.८७ प्रतिशत तथा कर्जामा ५२.८६ प्रतिशतको छलाङ | Makalukhabar.com
साउन २९, काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले समीक्षा अवधिमा आफ्नो ब्यवसायमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । बैंकले गत आ.व. २०७४/०७५ मा निक्षेप १५.७५ अर्ब रहेकोमा ४५.८७ प्रतिशतले वृद्धि भई २२.९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको छ ।
साथै कर्जा तर्फ सोही अवधिमा १३.२० अर्ब रहेकोमा ५२.८६ प्रतिशतले वृद्धि गरी २०.१८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । २.५४ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी भएको बैंकको जगेडा कोषमा ५०.३८ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।
आ.व. २०७५/०७६ को असार मसान्तमा बैंकको पूँजीकोष अनुपात १७.०३ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै प्रति शेयर आम्दानी १३.७० रुपैयाँ, मूल्य आम्दानी अनुपात ११.६८ गुणा, प्रति शेयर नेटवर्थ १३१.०९ रुपैयाँ र तरलता अनुपात २२.७४ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले निक्षेप अवधिमा आधार दरलाई ११.५९ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ ।
बैंकले आ.व. २०७५/०७६ मा सेवा विस्तारका क्रममा थप ३६ वटा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको छ । सेवा विस्तारकै क्रममा बैंकले थप २८ वटा ए.टि.एम. सञ्चालनमा ल्याउनुकासाथै स्मार्ट टेलर, मोबाईल बैकिङ्ग, कामना सेवा रेमिट, भिजा कार्डजस्ता नविनतम् प्रडक्टहरु ग्राहकसामु प्रस्तुत गरेको छ ।
शाखा विस्तारसँगै बैंकको सञ्चालन खर्च तथा कर्मचारी खर्चमा वृद्धिका बावजुद बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खुद मुनाफा ३२.५४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ ।
मंसिर २९, काठमाडौँ । भोईथ अन्र्तगतको कम्पनी युनाईटेड हेभी ईक्युपमेन्टस् एण्ड अर्थमुभर्स (यूहीम) सञ्चालनमा आएको छ । सन् २०१८ देखि नेपालको निर्माण क्षेत्रमा आधुनिक उपकरणहरु भित्र्याई निर्माण कार्यहरु सहज र सुलभ बनाउँदै आएको यूहिमले विश्वविख्यात निर्माण कम्पनीहरु सन्वार्ड, सिनोम्याक र नियोसेनका निर्माण... जारी राख्नुहोस...
पोखरा लेकसाईडको ३ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक महोत्सव
मंसिर २९, चितवन । मुलुकको दोश्रो पर्यटकीय क्षेत्र पोखरामा आउँदो पुष १२ गतेदेखी सडक महोत्सव हुँदैछ । सडकमै खाउँ सडकमै रमाऔ भन्ने नाराका साथ पोखरा रेवानको आयोजनामा महोत्सव हुन लागेको हो ।पोखरा लेकसाईडको करिब ३ किलो मिटर सडकमै महोत्सव हुनेछ । महोत्सवको प्रचार प्रसारसँगै निम्तो बाँड्दै हिडेको रेवान पोख... जारी राख्नुहोस...
सुनको भाउ बढ्यो, हेर्नुस् आजको भाउ
मंसिर २९, काठमाडौँ । साताको अन्तिम दिन शुक्रबार तोलमा ४ सय रुपैयाँले घटेको सुनको मूल्य आज साताको पहिलो दिन आज आईतबार तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार शुक्रबार प्रतितोला ७० हजार ८ सय रुपैयाँ कायम भएको छापावाल सुन आज प्रतितोल ७१ हजार ३ सयमा कारोबार भई रहेको महासं... जारी राख्नुहोस...
विदेशी मुद्रा साट्दै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस्र आजकाे विनिमयदर
मंसिर २९, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ ०० पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ६० पैसा ताेकेको छ । यस्तै, युरो एकको खरिददर १२६ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १२७ रुपैयाँ ०३ पैसा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसैगरी पाउण्ड एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ३९ पैस... जारी राख्नुहोस...
ज्योतिपुञ्ज सहकारीको एक वर्षको नाफा १ करोड १९ लाख
मंसिर २८, धरान । सुनसरीको धरानस्थित ज्योतिपुञ्ज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले एक वर्षमा १ करोड १८ लाख बढि मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । सहकारीको आज ११ औ वार्षिक साधारण सभामा उक्त जानकारी दिइयो । सहकारीका अध्यक्ष मनोज भट्टराईले साधारण सभामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस वर्ष १ करोड १९ लाख ६८ हजार... जारी राख्नुहोस...
घाटा लागेपछी चल्ला उत्पादन नै बन्द गर्ने निर्णय
मंसिर २८, चितवन । उत्पादन लागतअनुसारको मूल्य नपाउँदा ठूलो नोक्सान बेहोर्नु परेको भन्दै ह्याचरी उद्योगहरुले १० दिन चल्ला उत्पादन नगर्ने घोषणा गरेका छन । नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घको केन्द्रीय समितिको शुक्रबार भएको राष्ट्रिय भेलाले चल्ला बिक्रि नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।मङ्सिर २९ गते देखि १० दिनसम्म कु... जारी राख्नुहोस...